Caafimaadka: Halista sigaar-cabista - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB »Caafimaadka: Halista sigaarka
Khatarta sigaarcabku way badan yihiin. oo ka mid ah Kansarka ka cudurrada wadnaha, iyada oo loo marayo saameynta ay leedahay sigaar cabista sigaarka iyo saameynta tubaakada inta lagu jiro uurka.
Jooji tubaako. © Underworld, Shutterstock
Tirooyinka tubaakada: dhimashada iyo isticmaalka
iibka tubaakada ahaayeen hoos ka badan 9% sannadihii la soo dhaafay, in ka badan 40 billion sigaarka waxaa loo soo dhiibay tobacconists in 2018, caasiyowday in ka sii badan 44 2017 billion. Tirada weli waa mid aad uga sarreysa markaan ogaanno in sigaar-cabiddu ay dad badan oo 78.000 ah ku dileen Faransiis sannadkiiba. Dhimashada dhimashada sigaarka waa sida soo socota:
48%% Kansarka ;
20% cudurrada wadnaha;
19% cudurrada neefsiga iyo 13% sababo kale (1).
Intaa waxaa dheer, isticmaalka sigaarka 20 maalintiiba waxay ku kordhisaa 3 khatarta wadnaha, khatarta ka iman karta dhacdooyinka iyo geerida lama filaan ah.
Sigaar cabista sigaarka ah waa mid ka mid ah halista sigaarka. Halkan, marka la barbardhigo hababka carruurta ee ku saleysan haddii waalidkoodu sigaar cabbo iyo haddii kale. © Tabac.net
Faransiisku waxay haystaan ​​tobankii milyan ee sigaar cabbin ee da'doodu ka yartahay 16 illaa 15. Ku dhawaad ​​saddex-meelood laba waa sigaar cabayaal joogto ah (85). Inta u dhaxeysa 1 iyo 18, ku dhowaad mid ka mid ah laba sigaar. Sigaarku wuxuu saameyn ku yeeshaa dhalinyarada 34 15 ee da'doodu ka yartahay saddex sano, waana gabdhaha ugu badan sida gabdhaha. uu baahsanaanta gaadhay ugu badnaan 46% dumarka 20-25 sano 55% ragga 26-34 sano. Tirada dumarka sigaarka si joogto ah u sheegay in tirada guud ee kordhay (2): waxa uu ahaa in 30,2 2010% of 27,6% in 2005.
xogta kale ee foomka of calaamad digniin, saadaasha ayaa tilmaamaya in 19 sano, nus ka mid ah wiilasha uu noqon doono sigaarka cabba (3). Ugu dambeyntii, korodhka boqoleyda ee sigaarka marka la eego da'da kooxaha korodhka in 35 sano ka dibna hoos u dhacay, idinkoo og, calaamad dhiiri-galinaysa in 63% ka mid ah dadka sigaarka cabba ka dhigay isku day ah in ay joojiyaan ama ka badan, oo ay gaaraan 10% joojiso sigaarka (4). Sigaarka waa arrin aasaasiga ah ee "dhimashada baaqsan karo" sida laga soo xigtayNOLOL (5).
Hoos-u-dhac ku yimid iibka sababtoo ah qiimaha xirmadda?
Miyuu kor u kici lahaa qiimaha baqshiishku ku dhiirrigeliyay sigaar cabbayaal badan si loo yareeyo isticmaalka ama xitaa joojinta sigaarka? Sigaar pack a maalin hadda ku saabsan 240 euros bishii iyo xukuumadda ayaa la siiyaa korodhka isku xigta ilaa 2020 in ay gaaraan xirmo 10 euros 20 sigaar ah. Maxaa dib uga fikiraya isticmaalka! Sannad kasta oo Faransiis ah, inta u dhaxaysa 400.000 iyo 500.000 joogtada ah ee sigaar-cabayaasha sigaarka joojiya ugu yaraan hal sano. Ogsoonow in ay suurto gal tahay in ay soo sheegaan in tubaakada France iibsan jaban (xaddi ka dib markii sida uu sheegay caadooyinka xeerarka) dibadda, laakiin tubaakada gadashada in Internet waa dhaqan la mamnuucay.
Nofeembar "Me (i) aan laheyn tubaako", tartan wadareed!
Laga soo bilaabo bishii November 2016 ee Wasaaradda Caafimaadka, hawlgalka "Moi (s) aan laheyn tubaako" ayaa soo ururiyay 180.000 dadka. Guuldaro lama filaan ah, oo cusbooneysiiyay 2017 iyo 2018, taas oo caddaynaysa xiisada iyo dhiirigelinta sigaar-cabbayaasha. Aynu sharxo in 2019, habka uusan ka baxsanin qolof ...
Sigaar cabid: khatarta cudurada joogtada ah
Ka sokow sigaarka in kaliya mas'uul ka ah dhimashada laga yaabaa in, uu ka sii daro cuduro badan oo chronic, wax badan si Council High HCSP ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa kaalinta ugu gudhintiisuna sida daaweyn xaq u leh bukaanka qaba istaroogga (stroke) laakiin sidoo kale liiska dheer ee shuruudaha: macaanka nooca I iyo II, Cagaarshowga B iyo C, cirrhosis caloosha, ulcerative colitis, renal failure, heleyla xiriira AIDS, wadnaha oo shaqadiisa gaba, cudurka wadnaha wadnaha, cadaadiska dhiigga sareeya, Cudurka Qalalaasaha, Xanuunka Xanuunada ee Xanuunada ee Xanuunka ah, Kansarroyinka Dheeriga ah, ama Bukaannada Qaadanaya musuqmaasuqa (6). Tubaakada waxay noqon kartaa a khatarta halista of theAlzheimer (7).
Uurka iyo tubaakada: Waa maxay khatarta?
Haddii uu firfircoon yahay ama si xamaasad leh, sigaar cabista ayaa loo yaqaanaa inay aad u dhibto hooyada iyo uurjiifkatan iyo markii carbon monoxide waxay sii dheeraaneysaa muddada dheerhemoglobin Uurjiifka. Tani waxay dhalinaysaa miisaanka dhalmada yar iyo laba-laabashada dhimashada ee utero iyo sanadka koowaad ee nolosha (8). Intaa waxaa dheer, ilmo ay hooyada u cabto inta lagu guda jiro uurka wuxuu keenaa jajab neefsasho iyo a cabista ilaawaa obeysité (9, 10).
Waxyeellada sigaar-cabista sigaarka
Ha nacasoobin: sigaar cabista sigaarka ayaa mas'uul ka ah cudurrada, iyo dhimashada 3.000 sanadkiiba waxaa loo aaneynayaa cudurada wadnaha iyo xididdada 2 / 3 (11). Waa in la ogaadaa in dalalka ay mamnuuc tahay in sigaar lagu cabo meelaha la isku hayo, heerka isbitaaleynta ee loogu talagalay xanuunka miyir-qaadiga ayaa si xoogan hoos ugu dhacay 17% sida ugu horeysa Meta-falanqaynta (Lightwood et al.), iyo 19%, sida laga soo xigtay falanqayn labaad-baaritaan (Meyers al et.) (12,13 14). Aragtidani kuma lahan mawduucyo faransiis ah, laga yaabee maxaa yeelaysoo-gaadhista sigaar-cabista sigaarka ayaa hoos u dhacaycodsiga illaa qiyaastii shan iyo toban sano oo sharciga Evin (15).
Caafimaad: Cabbiraadda tubaakada: saameynta nicotiinta